Sicirkii Hore ee baradhada ayaa ku dhacay Yukrayn - Nidaamka baradhada
Suuqa Yukreeniyaan, waxaa jira u janjeera in si deg deg ah hoos loogu dhigo qiimaha baradhada dalag cusub, sida ay qabaan falanqeeyayaasha mashruuca EastFruit. Howlwadeenada suuqyadu waxay u tixgeliyaan sababta ugu weyn ee isbeddelka sicirka xun inuu yahay hoos u dhac muuqda oo laga dareemayo danaha shirkadaha dhoofinta iibka alaabadaas.
Sidaas darteed, maanta beeralayda Yukreeniyaan waxay diyaar u yihiin inay dhoofiyaan baradhada hore qiimahoodu yahay 8-12 UAH / kg ($ 0,30-0,45 / kg), oo celcelis ahaan 20% ka jaban marka loo eego bilowga toddobaadkan. Soo-saareyaasha ayaa lagu khasbay in ay sicirkooda qiimo ku bixiyaan sababo dhawr ah awgood. Sidaa darteed, marka lagu daro kororka saadka xilliyeedka, cadaadiska sicirka ayaa waxaa saaray hoos u dhac ku yimid wax iibsiga dhoofinta dhoofinta. Sidaas darteed, soo-saareyaashu waxay ku khasbanaadeen inay iibiyaan ku dhowaad dhammaan mugga baradho hore suuqyada waddanka.
Waxaan ku darin xitaa ka dib hoos u dhac weyn, qiimaha baradhada hore ee Ukraine xilligan xaadirka ah ayaa celcelis ahaan 14% ka sarreeya isla xilligaas sanadkii la soo dhaafay. Isla mar ahaantaana, beeralleydu ma saamaxayaan suurtagalnimada in siggaarka soo socda ee badeecadan ay hoos u dhici doonaan marka ay dhacdo dhoofinta dhoofinta oo dheeraad ah.
Tags: baradhada horeqiimo dhimisUkraine